अधिनायकवादी ओली - Nayapul Online
प्रकाशित मिति : Sunday, July 8, 2018 nayapulonline
असार २४, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू अधिनायकवादी नभएको महिनौंदेखि स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । अधिनायकवाद हटाउन १४ वर्ष जेल बसेको र लोकतन्त्रकै लागि जीवनभर लडेको व्यक्ति अधिनायकवादी हुनै नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ ।
अर्कोतर्फ, ओली नेतृत्वको सरकार अधिनायकवादी दिशामा अघि बढेको भन्दै विपक्षी कांग्रेस र नागरिक समाजका सदस्यसमेत आन्दोलित हुन थालेका छन् ।
सत्तापक्ष र विपक्षका तर्क-वितर्कले अधिनायकवादको बहसलाई सतकमा ल्याएको छ ।
अधिनायकवादको पक्ष-विपक्षमा वाद-प्रतिवाद भइरहँदा स्वयं ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाभित्रैको एउटा ठूलो समूह ओलीको बचाऊका लागि मैदानमा उत्रिएको छैन । आखिर किन ओलीकै पार्टीका नेताहरु उनको बचाउमा बोलिरहेका छैनन् ? यसो हुनुको कारण हो- पूर्वएमालेमा केपी ओलीले हुर्काएको आन्तरिक अधिनायकवाद ।
नेकपाका केही नेताहरुको विश्लेषण के छ भने केपी ओली अधिनायकवादी बाटोमा अघि बढेको सरकारमा पुगेर मात्रै हैन । एमालेको अध्यक्ष हुँदादेखि नै ओलीले पार्टीभित्र अधिनायकवाद लादिरहेकै थिए । त्यसको मार झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरुले भोग्दै आएका थिए/छन् ।
आलोचना नसहने, विपक्षीसँग असाध्यै असहिष्णु हुने, घमण्ड गर्ने, अनि प्रशंसाको भोकमा डुबेका केपी ओली पार्टी जीवनमा अलोकतान्त्रिक भएकाले अहिले सरकारमा उनले त्यही अभ्यास गर्न खोजेेको विश्लेषण नेकपाभित्र हुन थालेको छ ।
आखिर, नेकपाभित्र ‘ओली अधिनायकवाद’ कसरी हुर्कियो ? ओलीले पार्टीभित्र कसरी अधिनायकवादको अभ्यास गरे ?ok
प्रदीप र जसिताको ‘लभ स्टेशन’ चैत १ गते बाट दर्शकमाझ आउँदै
झण्डा महोत्सवमा जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरु हुने